Chee maka obere onyinye ọ bụla ị nwere ike inye taa
O we nara ob loe achicha ise na azù abua ahu, le anya n’elu-igwe, gọzie ya, nyawa ob loe achicha ahu, we nye ndi n disciplesso uzọ-Ya; Ha nile we rie, afọ ju kwa ha, we chikọta nke fọduru, nkata iri na abua. Matiu 14: 19b-20
Ever nwetụla mgbe ọ dị gị ka ị nweghị ihe ị ga-enye? Ma ọ bụ na ị nweghị ike ịme ihe ụwa a? Oge ụfọdụ, anyị niile nwere ike rọọ nrọ nke ịbụ onye "dị mkpa" nke nwere nnukwu ikike iji rụọ "ihe ukwu". Mana nke bu eziokwu bu na inwere “ihe nta” I kwesiri inye nnukwu ihe.
Akụkụ Oziọma nke taa na-ekpughe na Chineke nwere ike iwere obere ihe achịcha ise na azụ abụọ, wee mee ka ha bụrụ nri ga-ezuru ọtụtụ puku mmadụ ("puku ndị ikom ise, na-agụta ụmụ nwanyị na ụmụaka". Matiu 14: 21)
Akụkọ a abụghị naanị ọrụ ebube maka ebumnuche nke inye igwe mmadụ ahụ nri dị mkpa, ọ bụkwara anyị akara aka ike nke Chukwu ịgbanwe ụwa anyị kwa ụbọchị ka ọ bụrụ ngọzi bara uru maka ụwa. .
Ihe mgbaru ọsọ anyị ekwesighi ịbụ ịchọpụta ihe anyị chọrọ ka Chineke jiri onyinye anyị; Kama, mgbaru ọsọ anyị ga-abụrịrị ịchụ ihe anyị nwere na ihe anyị nwere ma hapụ ngbanwe Chukwu. O nwere ike ịdị ka ihe anyị na-enye agaghị enwe uru ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ịchụrụ Chineke ọrụ dịịrị anyị kwa ụbọchị ma ọ bụ ihe ndị yiri ya nwere ike iyi enweghị mkpụrụ. Gịnị ka Chineke ga-eme nke a? Ndị nwere ogbe achịcha na azụ ahụ nwere ike jụọ ajụjụ ahụ. Mana lee ihe Jizọs mere ha!
Anyị kwesịrị ịtụkwasị obi kwa ụbọchị na ihe ọ bụla anyị na-enye Chineke, ma ihe itiri ma ọ dị obere, ka Chineke ga-eji were ya. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ghara ịhụ ezigbo mkpụrụ dị ka ndị dị na akụkọ a, anyị nwere ike ijide n'aka na mkpụrụ ọma ga-aba ụba.
Chee maka obere onyinye ọ bụla ị nwere ike inye taa. Obere àjà, obere ịhụnanya, mmehie mgbaghara, obere ọrụ ije, wdg, nwere abamuru na-enweghị atụ. Were onyinye a taa ma hapụ Chineke nke fọdụrụ.
Onye-nwe, a na m enye gị ubochi m na obere ọrụ nke taa. Ana m enye gị ịhụnanya m, ọrụ m, ọrụ m, echiche m, nkụda mmụọ m na ihe ọ bụla m zutere. Biko were obere onyinye ndị a ma gbanye ya ka ọ bụrụ amara maka ebube gị. Jesus m kwere na gị.
← Na post gara aga Gara aga post:Ọgọst 2, ntinye obi na mgbaghara nke St. Francis nke Assisi
Ọzọ Post → Post ozo:Sant'Eusebio di Vercelli, Saint nke ụbọchị maka Ọgọst 2nd